Vera uBrezhnev - omunye abahlabeleli oyisilomo yesimanje Russian pop yesehlakalo. Lona wesifazane enezwi elikhulu futhi sikhumbuleke futhi ukubukeka emangalisayo ezikhangayo. Izinkanyezi abalandeli bamangala ukuqaphela ukuthi eminyakeni ayizintandokazi zabo kuba sihle futhi mnandi kuphela. Kodwa kuze kube muva nje, akekho owayazi ukuthi ukubheka Vera uBrezhnev ebusheni bakhe, eziningi amaqiniso biography wakhe, futhi, baba imfihlakalo.
Nonstellar intsha izinkanyezi
Ukubheka Vera uBrezhnev, namuhla, kunzima ukukholelwa ukuthi umculi wayeke nenkinga ukuzethemba. Kodwa eqinisweni, eminyakeni esikoleni starlet wazibheka owesifazane ethafeni, abaphethwe uthando unrequited, futhi kuyaqabukela thatha isinyathelo kuqala ukuxhumana nabobulili obuhlukile. Vera uBrezhnev ebusheni bakhe ntombazanyana abavamile kakhulu, hhayi ukusho - hhayi kuhle kakhulu. umculi Ikusasa kwadingeka izinkinga zamehlo futhi egqoka izibuko, futhi baqhuba zonke izinhlobo ucwaningo nge izinwele: bona ababethi amathoni amnyama futhi wenza kwamakhemikhali. Ngenxa yalokho, izithombe, lapho iminyaka Vera 17 ubudala, alunguza indala kunalokho eyikho namuhla. Ngokuphawulekayo, inkanyezi akufihli esidlule yakhe. Akunjalo kudala, yena othumele izithombe siqu sakhe eminyakeni eyishumi edlule ekhasini lakhe 'Instagrame "futhi wathi kubo bonke abasebenzisi inthanethi:" Yebo, yebo, ngempela Vera uBrezhnev ebusheni bakhe. "
Umculi, actress, ...
Vera uBrezhnev uthi ngesikhathi esakhula akazange isaziso amathalente akhe ekhethekile. Yena kuphela ngezikhathi ezithile nengxenye amateur ahlukahlukene. Ukuxoshwa iqembu "Via Gra" yavela ngengozi futhi kwaba yimpumelelo. Kuze kube manje, abalandeli eziningi band zithi ukubunjwa 2003 (anna sedokova, Nadezhda Granovskaya, Vera uBrezhnev) yikona okungcono. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, Heroine wethu uye wasebenza iqembu iminyaka 4, futhi ngo-2007 waqala i-career solo. Namuhla umculi Vera uBrezhnev, lihlabelela hhayi kuphela, kodwa futhi wavela ezithombeni, kanye ukukhonza njengoba nomthofu telecasts ahlukahlukene. Kuyini ezithakazelisayo, yize simatasa ekhonsathini kanye sigameko uhlelo, inkanyezi has isikhathi sabo, bezinaka umndeni, futhi uthola isikhathi ku into ebaluleke kakhulu ekuphileni kwezinceku phi ntu - Yebo, uthando.
ukuphila Vera uBrezhnev eqondene nabo izimfihlo ihlazo kakhulu
umculi Ukuthembisa futhi amadoda ezithakazelisayo esizayo wakwazi ukukhetha kusukela ebusheni. Kakade engu-18 Ukholo langena mshado wasehhovisi kanye usomabhizinisi Vitaly Voichenko. Kulesi inyunyana wazalwa indodakazi Sonia. Ngo-2006, uBrezhnev lokuqala kuya Registrar nge Mihailom Kipermanom, okuyinto yaziwa nangokuthi ophumelelayo. Kulesi umshado yazalwa Indodakazi yesibili - USarah. Ngo-2012, umbhangqwana uhlukana, kulokhu Vera ezahlukweni isikhathi esiningi umsebenzi wakhe futhi lokusungula. Njengoba indaba iya, indaba ihlazo lokulala Konstantin Meladze waqala ukusebenza ndawonye ngo-2014. Nokho, ngokuvumelana kwezinye izinguqulo, ngisho nalolu hlobo ngokukhululekile nangomoya uthi nowayeshade ngomfazi umkhiqizi kanye umqambi, lobu buhlobo ihlala kusukela 2003. Nokho, yini umehluko uma namuhla Vera uBrezhnev Meladze futhi ungangifihleli nobuhlobo babo? Akunjalo kudala cindezela kwakukhona imibiko imfihlo udumo lomshado. Ngokusho kweminye imithombo, ngokushesha ukukhanya kuyoba indodakazi yesithathu Ukholo.
Izimfihlo ezempilo nobuhle
Ngo izingxoxo eziningi, uBrezhnev wawuthi Umbono ophambene ukuhlinzwa isikhumba. Inkanyezi uthi ukubukeka kwakhe ngokuyinhloko wahlanganyela uqobo futhi ngezikhathi ezithile kuphela asebenzise wochwepheshe futhi cosmetologists. Kungakhathaliseki ukuthi laliyini, umculi Vera uBrezhnev ubukeka amazing nobudala bakhe. Star akufihli izimfihlo ubuhle futhi uzimisele ukwabelana ngazo nabalandeli.
Yena njalo abathintekayo kwezemidlalo, zama ulala ngokwanele futhi udla kahle. Ukuze abalandeli bakhe, ngisho Ukholo ikhasi ehlukile "Instagrame", okuyinto njalo ishicilela okusanda kuqoshwa, elalinikezelwe nokuzinakekela futhi unakekele ubuhle babo. Ngokwe-Star wathi, into ebaluleke kakhulu - alwele ukuba enempilo futhi ukumamatheka eziningi. Ngokuqondene izinqubo ezithile - kubalulekile ukuthola amathuluzi ube okuhle futhi ningesabi lutho ubuvila njalo ukunikezela isikhathi ngokwakho. Kungenzeka ukuthi ukukhiqizwa kwale mithetho elula, umculi wathatha isikhathi eside, ngoba namuhla singasho ngokuqiniseka ukuthi Vera uBrezhnev ebusheni bakhe akazange ababukele njengoba zikanokusho njengoba manje.
Kalmyk node: izindlela ukunitha, usebenzisa
Njengoba kukhona Pitahaya